Ayaanle Abdirahman Qoyste - Hoygamaansada
Ayaanle Abdirahman Qoyste
Ayaanle Xasan C/raxmaan Qoyste, wuxuu sanadkii 1995-kii ku dhashay Magaalada Muqdisho halkaas uu ku barbaaray waxbarashadana ku dhameystay ilaa heer jaamacadeed.
Ayaanle waxaa uu bartay maadada IT-ga balse fursad shaqo kuma uusan helin xirfadaasi. Halka uu iska fadhini lahaa camal la’aan wuxuu door biday inuu waqtigiisa uga faa’iideysto dhanka saxaafadda oo uu waligiis jeclaa.
Dhanka kale, Ayaanle waa hal-abuur da’yar oo curiya noocyada kala duwan ee maansada.
“iskuma tilmaami karo Gabayaa inkastoo Awoowe-yaashey gabyi jireen, balse waxaan ahay Hal-abuur da’yar oo wax badan ka yaqaana noocyada kala duwan ee Maansada Soomaaliyeed” ayuu yiri Ayaanle. “Jecelna horumarinteeda, waana tan igu qasabtay inaan la soo xariiro Hoyga Maansada Soomaaliyeed oo aan bogaadiyo howsha ay wadaan,”
“Qiyaastii 7 sano ka hor ayaan bilaabay inaan hab Suugaaneyd ku cabiro arimaha taagan,markaasoo aan dib u milicsaday dhibaatadii Dagaalada Sokeeye ay ka dhaxleen Dhalinta gayaankeyga ah iyo guud ahaan Soomaalida.”
Gabayada Abwaanka oo idil Ayaanle Abdirahman Qoyste
Weyne ka barayey
In ay mar un ku bariisato
Xaruntan ku barbaaray iyo
Xamar bilantii aan jeclaa.
Saakana Ku bigaacso araga
Hadey beri ahayd
Xarun bahal galeenoo
Dadka lagu bireeyo
Caalamkuna ka baqo
Maanta wey ka baanatoo
Waa kaa baraarahedu
Daaro bidhaan qurxoon iyo
Ganacsigoo baaha iyo
Nabad bey barqadan
Bilado ku mutadatoo
Dalxiis bey beegsaneysa.
Dhibtiyo Baladda qaraxyadana
Waxey kala baal tahoo
Baroorta la wadaaga
Baariis iyo bijiin iyo
Dunidaa baaxada lahoo
baroor diiqdu ka socotee
Baajinteedana eebe hayoo
Ka barinaa had iyo goor.
Anigoon ku taag taagsanin'oo
Qar ka tuurin maansada
Aan dhorw tuduc ka taabto
Tiiraanyo ooyo maantaba.
Dhib la'aan ma timaadee
Ilintan dhabankeyga taaliyo
Tabaalahan i heysta
Waxa igu talaalay
Tacadiga tahribka weeyoo
Anbiyey tiirkii qaranka iyo
Murug baa is daba taaloo
Ilin hooyaa tif tiri
Key ku tacab beeshay
Inuu hilibkisa u tuuro
Caddow tacadi bada naftiisa.
Haku taamin tahriibkoo
Ha tuhmin marnaba
Libintiisu in ay tahay
Tamshleyn iyo farxade
Naftada ha u tuurin
Ma gafe tuug ahiyo
Cadaw tacadi bada naftaada.
tu'na haku tashanina
In ay ku baahi tirtoo
Taajir ku noqotaa
Dhismo tayo lahoo
Nin kale tusmeysto
Dhidibada u taagtay
Ogow Tiisii weeyoo
Adaa kaagii ka tagayoo
Tashuus baday naftaadee.
Darajo ma ahan tahriibke
isku geeya taaloo
Qorshahaa Ka tanaasuloo
Aan mar qura tilaabsano
Gurano tacabka beerahiinee.
Colaad ku Garaadsaday
Waxaan ahay gaban
Guluf lagu hoobtiyo
Xabad la ganaayo iyo
Ku garaadsaday colaadoo
Galina arag barwaaqee.
Waxa igu gaar yeeloo
Iga keenay gurigeenoo
U gabaadsanaya hawdkaan
Waa Nabad baadi goobkeedee.
Ragbaa u guntaday
Godob in ay naga galaanoo
Nagu gil gilaan madaafiic iyo
Gaajada iyo bacadkan
Golle in ay inoo ahato
Hurdaba gam'i weyno.
Guurti iyo Culumo
Indheer garad ma daayaan'oo
Garaadkoodu wuxu yahay
Guulaan oran mooyee
In ay mar qura na galiyaan.
Waxba ma gocosho ooyayee
Garbey u lahayd nafteyda
Galad nabadeed iyo
Guud ahaan asaagey
Inta dunida guud joogta
Taclintey gaarka u heleen iyo
Miraha Nabadey gurtaan.
Aan gaabiyo tabashade
Gunaanudkuna wuxu yahay
Soomaalaay garo dhalishoo
Waa kuwaa goor hore
u ganay cirkiyo samada kore
Inaguna gadaasoo kale
Garawshiyihu wa ma huraane
Golle in aynu ku kulano
Colaadan ina kala gaabisay iyo
Qabyaalada guunka ah
aan gorofkeeda tuurnoo
Aan gocla orad u galno
Ku dhaqaaqno galabtaba.
Guusheenu halkey taal.
Hambaliyo Hoyga Maansada
Hadey muddo habsaantoo
Hugunka maanso la waayey
Iga hooya maanta
Hirgaliyey hoyga maansado
Hal abuurka hodanka ku ahaa
Qiimaha afka hooyo.
Xilkay hagoogan yihiin iyo
Hambalyaa u mariyoo
Ducaan u hurayee
Hiigsigoodoo rumooba iyo
U hiiliya afka hooyo
Isagaa ma huraano
Huwan murtiyoo idilee.
Ayaanle Abdirahman Qoyste war dheeri ah